के तपाईलाई थाहा छ ? औंला पड्काउँदा किन आवाज आउँछ, यस्तो छ रहस्य, यसो गर्नु कति उचित ? | Rajmarga
के तपाईलाई थाहा छ ? औंला पड्काउँदा किन आवाज आउँछ, यस्तो छ रहस्य, यसो गर्नु कति उचित ?
वैज्ञानिकहरुको ध्यान मानिसको सबैभन्दा विचित्रका बानीहरुमध्ये एकमा छ–औंला मर्काउँदा आवाज किन आवाज आउँछ ।
अमेरिका र फ्रान्सका शोधकर्ताहरुका अनुसार यसको कारण गणितको तीन समीकरणको सहयोगमा बताउन सकिन्छ । उनीहरुको मोडलबाट यो कुरा सावित हुन्छ कि यो आवाज हड्डीहरुको जोडमा जुन तरल पदार्थ हुन्छ, त्यसमा फोका फुटेका कारण हुन्छ ।
आश्चर्यको कुरा यो छ कि यो प्रक्रियामा एउटा पूरा सताब्दीसम्म बहस भइरह्यो । फ्रान्समा विज्ञानका छात्र विनित चन्द्रन सुजा क्लासमा आफ्नो औला पड्काइरहेका थिए, जब उनलाई यसको बारेमा पत्ता लगाउने विचार आयो । उनले आफ्नो प्राध्यापक डाक्टर अब्दुल बरकतका साथ गणितीय समीकरणहरुको एउटा सिरिज तयार गरे जसको सहयोगबा बताउन सकियो कि औंला र नारीको जोडलाई मर्काउँदा आवाज किन र कसरी आउँछ ।
उनले बीबीसीसँग भने–पहिलो समीकरणबाट थाहा भयो कि जब हामी आफ्नो औंला मर्काउँछौ, हाम्रो हड्डीको जोडमा अलगअलग दबाव हुन्छ ।
‘दोस्रो समीकरणबाट थाहा हुन्छ कि अलग दबावबाट फोकाको साइज पनि अलग हुन्छ ।
‘तेस्रो समीकरणमा हामीले आलगअलग साइजको फोकोलाई, आवाज आउने फोकाको साइजका साथ जोड्यौ।’
चन्द्रन सुजाले भने कि यो सबै समीकरणबाट एउटा पूरा मोडल बन्यो जसले औला मर्काउँदा आवाज आउनुको कारण बताउँछ । चन्द्रन अहिले क्यालिफोर्नियाको स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालयमा पोस्टग्रेजुएशन गरिरहेका छन्।
जब हामी आफ्नो औंला पड्काउँछौ तब हामी आफ्नो जोड्नीहरुलाई खिचिरहेका हुन्छौ । र, जब हामी यसो गर्दछौ तब दबाव कम हुन्छ ।
फोका तरलका रुपमा हुन्छ, जसलाई साइनोवियल फ्लूड भनिन्छ । औला पड्काउने प्रक्रियामा जोड्नीको दबाव परिवर्तन हुन्छ र त्यसबाट फोका पनि तिब्रताका साथ घटबढ हुन्छ । यही प्रक्रियाबाट आवाज उत्पन्न हुन्छ ।
यो मोडलबाट दुई विपरीत सिद्धान्त अर्थात सिद्धान्तहरुमा एउटा सम्बन्ध देखिन्छ । फोकोहरु फुटेर आवाज उत्पन्न हुन्छ, यो कुरा पहिला १९७१ मै सार्वजनिक भएको थियो ।
तर ४० वर्षपछि यसलाई नयाँ प्रयोगपछि चुनौति दिइएको छ, जसमा भनिएको छ कि फोका औला पड्काएको निकैबेरपछि पनि फ्ल्युडमा कायमै रहन्छ।
यो नयाँ मोडलपछि यो मुद्दा हल हुँदै गएको देखिन्छ किनभने यसअनुसार केही फोकाहरु फुटेका कारण आवाज उत्पन्न हुन्छ, त्यसैले औंला पड्काएपछि पनि ससाना फोका तरल पदार्थ बनिरहन्छ ।
यो अध्ययनको नतिजा साइन्टिफिक रिपोर्ट जर्नलमा प्रकाशित गरिएको छ, जसबाट थाहा हुन्छ कि फोकाहरु फुट्दा जुन दबाव उत्पन्न हुन्छ, त्यसबाट वेभ उत्पन्न हुन्छ, जसलाई गणितको समीकरणबाट बुझ्न सकिन्छ र मापन गर्न सकिन्छ ।
यसबाट पनि यो कुरा थाहा हुन्छ कि मानिसहरु आफ्नो औंला किन पड्काउँछन् । यदि तपाईको औंलाको जोड्नीको हड्डीमा बढी स्थान छ भने दबाव त्यति धेरै आउन सक्दैन, जसले आवाज निकाल्न सकोस् । बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: ८ प्रकारका श्रीमान ? बिवाहित हुनुहुन्छ भने तपाई कुन प्रकारको श्रीमान ?
Next post: Sonica’s interview with Dhurba Bisco